Injection ကိုများအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin (PMSG) - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Injection ကိုများအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin (PMSG)
ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin (PMSG) ထူးခွား Effect [ဖျေါပွခကျြ] ဒီထုတ်ကုန်အဖြူအေးခဲ-အခြောက်လုပ်ကွက်သို့မဟုတ်အမှုန့်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အတူမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်။ [ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ ဒါဟာ follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းနှင့် luteinizing ဟော်မုန်းများအတွက်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်များအဘို့သားအိမ် follicles ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရငျ့မြှင့်တင်ရန်နှင့် estrus နှင့်မျိုးဥထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအထီးတိရိစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးတက်စေခြင်းနှင့် spermatogenesis မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသာမန်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်: စူပါ ovulati ခုနှစ်တွင် 1. ...
P ကို regnant M က များမှာ S ကို erum , G onadotropin (PMSG)
အမြင့် P ကို urity နှင့်အတူ R ကို emarkable Effect
ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ ဒါဟာ follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းနှင့် luteinizing ဟော်မုန်းများအတွက်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်များအဘို့သားအိမ် follicles ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရငျ့မြှင့်တင်ရန်နှင့် estrus နှင့်မျိုးဥထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအထီးတိရိစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးတက်စေခြင်းနှင့် spermatogenesis မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သန္ဓေသားအစားထိုး၏စူပါမျိုးဥထွက်မှာတော့ 1. ။
2. သိုးများအတွက် Twin နှုန်းသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလျက်, receptors များအတွက် estrus ထပ်တူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်။
3. , estrus သို့အမျိုးသမီးတိရိစ္ဆာန်များလှုံ့ဆျော follicular ဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်နှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှု estrus သို့မဟုတ်ကြောင့်မလှုပ်မရှားသားအိမ် function ကိုမှ estrus သို့လာရန်ပျက်ကွက်ကိုပျောက်ကင်းစေရန်။
ကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် follicles ၏အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကြောင့်သားအိမ် hypofunction နှင့်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းမှမျိုးစုံ-follicles ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကုသရန်အတွက်4။
estrus သော induction နှင့်ခုနှစ်မှာ 5. estrus ထပ်တူ .
6. aspermia, oligospermia, ဆင်းရဲသောသုက်ပိုးတက်ကြွနှင့်အထီးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုပျောက်ကင်းစေရန်။
ထိုးသွင်းသောအခါ, diluents နှင့်အတူရောလျက်ရှိလိမ့်မည်။
အဝါရောင်တိရစ္ဆာန်များအဘို့ 1. 1000IU; ကျွဲများအတွက် 2000IU; နွားများအတွက် 1000-1500IU; စူပါမျိုးဥထွက်ဘို့ 2000-3000IU
ဝက် (ပေါင်း hCG ၏ 500-1000IU) အတွက် 2. 1000IU, ဒါမှမဟုတ်အလေးချိန်အားဖြင့် 100kg နှုန်း 1000IU
သိုးတို့အဘို့ 3. 300-500IU; စူပါမျိုးဥထွက်ဘို့ 600-1000 IU သည်
သမင်အဘို့အ 4. 1000IU; အနီရောင်မင်များအတွက် 1500IU
ယုန်အဘို့ 5. 30-50IU; minks များအတွက် 100IU; nutria အဘို့အ 300-500IU; ခွေးနှင့်မြေခွေးများအတွက် 500-1000IU; ကြောင်များအတွက် 200-400IU
ကြွက်အဘို့ 6. 5-10IU; ကြွက်အဘို့အ 10-20IU
လိုအပ်အဖြစ်ထုတ်ကုန် aqueous ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာထိရောက်မှုဆုံးရှုံးဖို့လွယ်ကူပါတယ်ကတည်းက 1. ဒါဟာကိုပြင်ဆင်ရပါမည်။
2. antibody PMSG စူပါမျိုးဥထွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်လာဖို့နောက်ပိုင်းကာလများတွင်ပူးပေါင်းအသုံးပြုသောခံရကြလိမ့်မည်။
A3 သို့မဟုတ် hCG ၏ 3. အသားထိုးဆေးမျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်အဖော်ရှာကာလအတွင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်။
5× 1000IU +5ပုလင်း diluent
Shaded နှင့်လုံ; တစ်ဦးအေးမြခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်အရပ်၌ (2 ℃ -8 ℃) တွင်သိုလှောင်ထားသော။
ယခင်: Posterior Pituitary Injection
နောက်တစ်ခု: ချို့ယွင်းသော Injection
Injection သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin (Pmsg)
ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum (Pmsg)
Injection ကိုများအတွက် Ceftiofur ဆိုဒီယမ်